अष्ट्रेलियामा समलिंङ्गी विवाहको पक्षमा जनमत, अब के हुन्छ ?
समलिङ्गी विवाहको पक्षमा जनमत प्राप्त भएपछि खुशी सांट्दै समलिङ्गी जोडी । Photo-AAP
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाउने भएको छ ।
समलिङ्गी विवाहका विषयमा गरिएको जनमत संग्रहमा अधिकांश सर्वसाधारणले समलिङ्गी विवाहको पक्षमा मतदान गरेपछि यसले कानुनी मान्यता पाउने भएको हो । १२ सेप्टेम्बरदेखी ७ नोभेम्बरसम्म गरिएको जनमत संग्रहको बुधबार बिहान नतिजा सार्वजनिक भएको हो ।
जनमत संग्रहमा कुल मतदाताको ६१ दशमलब ६ प्रतिशत संख्याले अष्ट्रेलियामा समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाउनुपर्ने पक्षमा आफ्नो मत राखेको थिए । कुल मतदाताको ७९ दशमलब ५ प्रतिशतले आफ्नो मत प्रदान गरेको सर्वेक्षणमा खसेको कुल मतको ३८ दशमलब ४ प्रतिशतले भने अष्ट्रेलियामा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन नहुने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
अब यो जनमतको नतिजा आजै संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ भने पास भएपछि उपल्लो सदनमा कानुन निर्माणका लागि पठाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुल र विपक्षी दलका नेता बिल सर्टनले यो कानुन छिटो प्रक्र्रियाबाट पास गरिने प्रतिकृया दिएका छन् । यसलाई छिटो पारित गर्नका लागि बिहिबारबाटै संसदमा प्राथमिकताका साथ समलिङ्गी विवाहका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका सम्बन्धमा छलफल पनि अघि बढाइने भएको छ ।
जनमतद्धारा स्वीकृत भएपछि अष्ट्रेलियाका लाखौं समलिङ्गीहरु खुशी भएका छन् । यो नतिजा आएपछि देशका विभिन्न भागमा खुशीयाली मनाईएको छ ।
कहिलेदेखी विवाह गर्न पाउँछन् समलिङ्गीले ?
अष्ट्रेलियाको संसदमा अहिले नागरिकताको विषय पेचिलो बनेको छ । संसदमा यो विषय प्राथमिकताको विषय बनेको छ । सोही कारण समलिङ्गी विवाह प्रभावित हुनसक्ने अनुमान केहीले लगाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री टर्नबुल र विपक्षी दलका नेता सर्टनले अष्ट्रेलियन जनताको मतलाई जतिसक्दो छिट्टो प्रक्रिया अघि बढाएर कानुन पारित गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरेका छन् ।
प्रक्र्रिया सहज रुपमा अघि बढेको अवस्थामा अष्ट्रेलियाका समलिङ्गीहरुले अबको एक महिनामा कानुनी रुपमै विवाह गर्न पाउनेछन् ।